Mgbe okwu na-abịa banyere MP4 egwuregwu na android, e nwere ọtụtụ puku ngwa dị na play ụlọ ahịa ma ụfọdụ nwere chinchi, ụfọdụ ngwa ngwa gị ama na ụfọdụ ndị zuru okè n'ihi na idozi niile na-echegbu gị. Onye ọ bụla nwere otutu videos dị na ekwentị na chọrọ na-ekiri ha n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla otú ahụ ga-ezi MP4 ọkpụkpọ na-egwu ya. E nwere ndabere ọkpụkpọ nyere site ọ bụla mobile ika ma na mgbe ụfọdụ adịghị mezuo gị chọrọ. Ya mere ebe a bụ top 10 Player maka android.
Part 1. Top 10 MP4 Players maka Android
Part 2. Download MP4 maka Android Free na Wondershare AllMyTube
BS.Player ™ ekesa ya dị ka a free multimedia video ọkpụkpọ nke a na-eji ihe karịrị 70 nde mmadụ n'ụwa nile. Mmepụta otu sụgharịrị ngwa na 90 global asụsụ na-eme ka n'aka na ngwa na-agba enweghị ihe ọ bụla lag na ngwaọrụ na-erughị nhazi ike.
Na-akwado kasị video faịlụ na ụdị gụnyere MP4, AVI, FLV, 3GP, MP3, FLAC, na WMV, wdg
ARMv5 & ARMv6 ngwaọrụ na-akwado.
Free version nwere ihe nile atụmatụ nke dị mkpa ma ụgwọ mbipute na-agụnye ụfọdụ ndị ọzọ ọrụ na ọ na-ewepu mgbasa ozi.
Na-akwado nkwanye ọdịnaya dị ka http ndụ iyi, RTSP, RTMP wdg
Dakọtara na Android 5.0 Lollipop
Playback faịlụ na-akpaghị aka ọbụna mgbe uncompressed.
Hardware nyopụta nkwado maka multi-isi.
Dị ka ndị mmadụ, ọ bụ ihe dị egwu ọkpụkpọ dị ka ọ na solves ọtụtụ ndị multimedia metụtara mbipụta gụnyere ebre HD videos, ndepụta okwu Njirimara, ruru selections maka fim, na-eke listi ọkpụkpọ, wdg
2. VLC maka android
VideoLan bụ a France dabeere emeghe iyi, na-abụghị uru nzukọ nwere ndị ọrụ afọ ofufo 20 dị iche iche mba nke ipuiche multimedia development. Ngo pụta na 1996 na ugbu a na-amalite free multimedia ngwaahịa n'okpuru GPL.
-Akwado ndị niile formats gụnyere MP4, MKV, MOV, OGG, M2TS wdg
Nkwado maka multi-track ọdịyo na ndepụta okwu.
Ọ na-ekwe na-agagharị na nchekwa ozugbo.
Nyocha echiche na ndị na-amasị ibudata a na ngwa n'ihi na nke oké audio àgwà,-acha anụnụ anụnụ-ray nkwado na ngwa ngwa faịlụ igodo. Ọ bụ free na-emeghe iyi, ma fiddly maka mfe ọrụ.
J2 Interactive bụ a vasatail software mmepe ụlọ ọrụ nke nwere nka na ọtụtụ dị iche iche ubi. N'ụzọ bụ isi dabeere na US na UK, J2 Interactive na-enyekwa IT consultancy na nwere ihe ike aha bioinformatics na usoro mwekota. Ebe a, anyị na-enwe ihe dị egwu multimedia ngwa site ha.
Ọ na-agụnye HW + decoder nke na-enyere ke ngwaike osooso.
Ọ na-akwado multi-isi nyopụta.
Nwere a ụmụaka mkpọchi.
Na arụ orụ fọrọ nke nta niile sobtaitel formats.
Na-akwado ederede ịke na na agba.
Ị na-adịghị ibudata ọtụtụ codecs dị ka ndị ọzọ ngwa n'ihi na nke oké format nkwado. HW / SW nyopụta ụdịdị nwere ike Switched kpọmkwem site video a na-egwuri, na e nwere onye na ad-free adịchaghị mbipute dị kwa.
PANDORA.TV e hiwere na 2004 na Korea dị ka a video nkekọrịta n'elu ikpo okwu, nke nwere collaborations na Ventures si Silicon Valley. Saịtị wee mba na 2008, na inception nke Android, ha wee na a bara uru multimedia ngwa.
Sere n'elu ihuenyo (Multitasking) arụmọrụ
Otutu sobtaitel formats akwado
Video playback ọsọ njikwa
HD videos na 30 asụsụ dị iche iche na-akwado
Ndị mmadụ na-enyocha ya dị ka otu n'ime ha mmasị multimedia ngwa n'ihi ya nkwado maka fọrọ nke nta niile formats na oké codec nkwado. The ngwa nwere otutu nke bara uru atụmatụ maka free. Ma mgbasa ozi na free version bụ nnọọ manụ.
INISOFT bụ a Korean dabeere na ụlọ ọrụ nke na-arụ ọrụ na DRM na Multimedia ngwọta maka Android dabeere ngwaọrụ. Inwe n'elu 10 nde ndị ahịa, ụlọ ọrụ mepụtara a ezigbo multimedia ọkpụkpọ, encoder na DRM maka Android ngwaọrụ.
Na-akwado playback ọsọ akara.
Akwado ọtụtụ sobtaitel formats.
Na-akwado AVI, MOV, MKV, FLV, AVI, 3GP, 3G2, ASF, WMV, MP4, M4V, TS, MTP, M2TS video formats.
Ọ na-akwado mmapụta play.
N'ihi na elu ọgwụgwụ imeputa na oké horsepower, a ngwa ga-eji ngwaike video nyopụta arụmọrụ nke nwere ike ịzọpụta batrị. Ma ala ọgwụgwụ ngwaọrụ ghara-agba ya were were. The free version nwere ike nwalere tupu ịzụrụ na adịchaghị otu.
Aaron Turner bụ a California dabeere na-amụrụ nke Computer Sciences bụ onye maara oru web na mobile ngwa development. CrunchKey, Stats ileba anya, Tụkwasị Obi, TxtNote na Tụkwasị Obi nakwa na e mepụtara Erọn.
Nwere ike igwu music na video ọnụ n'otu playlist.
-Enye gị ohere dezie gị playlist mgbe ke ojiji.
Ihe niile dị mkpa bụ tupu kwajuru.
Dakọtara na nta ọ bụla version nke android.
Na-akwado nta ọ bụla ọdịyo na video faịlụ Ọkpụkpọ.
A oké ma dị mfe ma minimalistic ngwa n'ihi na ndị na-adịghị chọrọ ukwuu hassle na chọrọ nwere ọrụ mere na-erughị ego nke uwa.
CloverTek Co., Ltd e guzobere otu ìgwè na 2010 na China na e na-eme ka multimedia ngwa gam akporo na IOS kemgbe ahụ. Ha nnukwu hit bụ MoboPlayer nke nwetara akara ya na n'elu MP4 egwuregwu na a oge dị mkpirikpi.
Na-akwado SRT, ịnyịnya ibu, na SAA sobtaitel formats.
Na-enye ohere multi-audio iyi.
Na-enye ohere listi ọkpụkpọ na-aga n'ihu ebre nke otu ụdị nke faịlụ.
Nwere thumbnails nke na-egosipụta videos.
Na-akwado video nkwanye site HTTP, RTSP ogbugba ndu.
Ọ bụ a siri ike ọkpụkpọ maka Android, nke rụọ ọrụ nke ọma na-arụ HD / HQ MKV na XviD videos, ma UI bụghị nnọọ mma na ire ụtọ. Otú ọ dị, atụmatụ dị ka multitasking na listi ọkpụkpọ ka elu maka ya.
ChangeTech bụ a Chinese ụlọ ọrụ nke na-elekwasị anya na android na IOS development. Ụlọ ọrụ ahụ si ebumnobi bụ ịgbanwe otú ọmụma bụ ohere na-akọrọ. Ndị ọzọ karịa wireless teknụzụ, multimedia bụ ihe ọzọ na iche iche nke ụlọ ọrụ na anyị na-ahụ n'ụdị RockPlayer.
Na-akwado ihe dị ka niile video na ọdịyo faịlụ formats.
Na-enye ohere ogbugbu akara.
Na-akwado na netwọk gụgharia.
Dakọtara na android ma gụọ 2.3 na n'elu.
Na-enye ohere TV nkwado.
Na mbụ dị na IOS, RockPlayer dị ugbu a na Android ma na-arụ fọrọ nke nta niile na-enweghị na-ewe ọtụtụ akụ nke ngwaọrụ. Ma 1080p playback na interface kwesịrị ka a mma.
Wondershare Bụ ihe ọzọ na Chinese ụlọ ọrụ nke e guzobere 2003 na awade vasatail ọrụ na ubi nke IT na software development. Inwe otu ìgwè ndị ukwuu ruru eru mmepe, Wondershare bụ otu n'ime nnukwu software na ụlọ ọrụ China.
Na-enye ohere na-egwu na-enweghị mattering banyere codecs.
-Akwado ndị niile sobtaitel formats.
Na-enye ohere online video Ikiri.
Na-enye ohere ka ịgbakwunye video na nche mgbe e mesịrị.
A na ngwa nwere oké mma nke na-akpọ si DVD nchekwa. The interface bụ ezi na-achọ ma e nwere ihe ole na ole glitches ebe a na-.
GPCSOFT na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na 2000 na mepụtara ọtụtụ ngwa ọdịnala n'ihi onye kọmputa, igwe na ngwaike usoro. Ebe ọ bụ na 2010, ụlọ ọrụ nwere gbanwere ya na-elekwasị anya Android mmepe na abịa na ụfọdụ nnọọ uru utilities.
Na-akwado a dịgasị iche iche nke video faịlụ formats.
Na-enye ohere ìgwè media òkè.
Mma arụmọrụ na a pụrụ ịdabere.
Na-akwado multiple windows ebre.
Mmapụta ise n'elu arụmọrụ n'ezie dị mma. Kensinammuo njikwa na gụgharia nhọrọ si YouTube, wdg arụ ọrụ dị ka a amara. Nke a ngwa nwere ike mwepu olu n'ihi na karaoke-u mgbe egwu na-akpọ a karaoke video.
Olee otú iji tọghata MP4 ka FLV na Zero Ogo Loss
MP3 vs MP4, ọdịiche dị n'etiti MP3 na MP4
> Resource> MP4> Top 10 MP4 Players maka Android